Jaamacadda Selcuk waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaale qandaraas leh; Selçuk University Faculty of Medicine Hospital, 657 No. Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah 4. (b) ee Qodobka X (b) ee Lifaaqa 06.06.1978 ee Mabaadi'da Shaqada Shaqaalaha Qandaraasyada lagu daabacay Jariidada Gazette ee taariikhi ah 7 oo ku lifaaqan Go'aanka 15754 / 28.06.2007 kuna taariikhaysan 26566 ee shaqada iyada oo la raacayo Qodobka (B). Wadarta guud ee 2 (Mid) shaqaalaha qandaraaska lagu qaatay ayaa lagu qori doonaa shaqooyinka loo cayimay.
Murashaxiinta ayaa looga baahan yahay inay dalbadaan gudaha 15 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda la daabacay xayeysiiskaan wargayska. (13 / 12 / 2019- 27 / 12 / 2019) inta u dhaxaysa maalmaha shaqada rasmiga ah iyo saacadaha shaqada (08: 00-17: 00), oo ay weheliso dukumiintiyada laga dalbaday websaydhka Kuliyadda Caafimaadka Jaamacada Selçuk.isbitaalka.selcuk.edu.tr webka) buuxinta foomka dalabka ee la bixiyo. (Codsiyada lagu sameeyo boostada lama aqbali doono.)
Ali eren ayuu yiri: